အမျိုးသားများနှင့် ဆင်တူရိုးမှား ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြုခြင် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
အမျိုးသားများနှင့် ဆင်တူရိုးမှား ၀တ်စားဆင်ယင်မှုပြုခြင်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အမျိုးသားများကို ယောက်ျားဗီဇ နှင့် အကျင့်စရိုက်တို့ဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူထားပြီး အမျိုးသမီးများကိုလည်း မိန်းမ ဗီဇနှင့် အကျင့်စရိုက်တို့ဖြင့် ဖန်ဆင်းထား တော်မူ ပေသည်။ ယောက်ျားတို့၏ ပြောဆိုနေထိုင်ပုံ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ပြောဆိုဝတ်ဆင် မှုက တစ်မျိုးစီခြားနားရပေမည်။ ၎င်းပြင် ယောက်ျားများသည် နေ့အချိန်နှင့်ပမာတူပြီး မိန…်းမသားတို့သည်ကား ညအချိန်ပမာတူပေသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်တွင် လာရှိသည်မှာ …..
ငါအရှင်မြတ်သည် ညဉ့်ကို သက်သေထူတော်မူ၏ ။ အကြင်အခါဝယ် ထိုညဉ့်သည် လွမ်းမိုးလေ၏ ။ ၎င်းပြင် နေ့ကိုသက်သေထူတော်မူ၏ ။ အကြင်အခါဝယ်နေ့သည် လင်းဝင်းလေ၏ ။ ထို့ပြင် အဖိုကိုလည်းကောင်း၊ အမကိုလည်းကောင်း ဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ကို သက်သေထူတော်မူ၏ ။ (စူရဟ် အလ်လိုင်လ် ၊ ၁-၂-၃)
ယောက်ျားများအတွက်ယောက်ျားတိုင်းအရည်အချင်းနှင့် အကျင့်အမူများ ရှိနေပြီး မိန်းမများအတွက် မိန်းမသားတို့၏ အရည်အချင်းနှင့် အကျင့်အမူများရှိနေခြင်းသာလျှင် သဘာဝကျ ပေသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ယောက်ျားက ယောက်ျားပုံစံဖြင့် မနေထိုင်ခြင်း၊ ၎င်းပြင် မိန်းမတစ်ဦးက မိန်းမသားပုံစံမနေဘဲ ယောက်ျားများကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်း၊ ဆံပင်တိုထားခြင်း၊ ၀တ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့် နေထိုင်သွားလာခြင်းတို့သည် ရှုတ်ချဖွယ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတုိ့အပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ လအ်နသ်ကျရောက်ပေသည်။
ရှရီအသ်တရားတော်က အမျိုးသားများအတွက် ကိုယ် ခန္ဓာဖုံးအုပ်ထားရမည့် အစိတ်အပိုင်းကို ချက်နှင့်ဒူးဆစ် အကြားရှိ အစိတ်အပိုင်းဟု ဖော်ပြထားပြီး၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ဖုံးအုပ်ထားရမည့် အစိတ်အပိုင်းကို မျက်နှာနှင့် လက်ဖ၀ါးတို့မှအပ ကျန်ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားရန် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါပညတ်ချက်များသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် သီးခြားစီမိန့်ဆိုထားသည့် ပြဋ္ဌာန်း ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုခေတ်အခါ သမယတွင် အမျိုးသားများကမူ အင်္ကျီလက်ရှည်၊ ဘောင်းဘီ ရှည်ဖြင့် လုံခြုံစွာ ၀တ်ဆင်လေ့ရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများကမူ အင်္ကျီလက်တိုနှင့် မလုံမလဲဝတ်ဆင်မှုကို Fanshion အဖြစ် ရွေးချယ်ကြလေသည်။ ဤ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးသည် အမျိုးသမီးများအဖို့ အစ္စလာမ့်တရားတော်နှင့် ဆန့်ကျင် ရာရောက်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအနေနှင့် အမျိုးသားများဝတ်စားလေ့ရှိသည့် တီရှပ်အင်္ကျီနှင့် ဘောင်းဘီရှည်ဝတ်ဆင်ခြင်းတို့သည် အစ္စလာမ့်တရားတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ပြီး ရှိုင်ဿွန်မိစ္ဆာ၏ လမ်းစဉ်နောက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ယောက်ျားပုံစံ အတုယူသည့် အမျိုးသမီး နှင့် မိန်းမပုံစံအတုယူသည့် အမျိုးသားများအပေါ် တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ လအ်နသ် ကျိန်စာသင့်တော်မူသည့်အကြောင်း ဟဒီးစ်တော် အရသိရှိရပေသည်။ ဟဇရသ် အိဗ်နိ အဗ္ဗားစ် (ရသွေ့) သခင်ကဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။
” မိန်းမများကို အတုယူသည့်ယောက်ျားများနှင့် ယောက်ျားများကို အတုယူသည့် မိန်းမများကို တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က လအ်နသ် ကျိန်စာပို့တော်မူ၏ ။ ” (ဗုခါရီကျမ်း)
သင်မတို့၏ အိနြေ္ဒသိက္ခာနှင့် ဂုဏ်အဆင့်အတန်းကား အလွန်တရာမှ မြင့်မားလှပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ အစ္စလာမ် သာသနာတော်၏ ပညတ်ချက်များအတိုင်း နေထိုင်မှသာလျှင် သင်မတို့ သည် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် အခြား အမျိုးသမီးများနှင့်မတူဘဲ အလ္လာဟ့်ဗန္ဒာပီသသူ မိန်းမကောင်း၊ မိန်းမမြတ်၊ မိခင်မွန်၊ သိက္ခာရှိသည့် အစ်မ၊ ညီမ နှင့် အိနြေ္ဒရှိသည့် အိမ်ထောင်ရှင်မ စသည့် ဂုဏ်ထူးဝိသေသများဖြင့် ထူးခြားပေါ်လွင်လာပေလိမ့်မည်။
This entry was posted on January 19, 2013, in အထူးကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အမေရိကမှာ Facebook ကနေ ဖုန်းအခမဲ့ပြောနိုင်ပြီ